आयल फ्री फ्रायर ▷ राय र बेस्ट एयर फ्रायर २०२१
तेल निःशुल्क Fryer
फिलिप्स एयरफ्रायर HD9621 / 90
Actifry एक्सप्रेस स्नैकिंग
Cecofry कम्प्याक्ट रपिड
Cecofry कम्प्याक्ट प्लस
राजकुमारी एरोफ्रायर XL
तेल फ्री फ्राइर: राय र कुन एक किन्न
03/2021 अद्यावधिक गरिएको
के तपाइँ तपाइँको मनपर्ने भुटेको खानाहरू नदिई आफ्नो आहार सुधार गर्न चाहनुहुन्छ? हट एयर फ्राइरहरू एक राम्रो विकल्प हो र तपाईंले भर्खरै तिनीहरूको बारेमा सन्दर्भ वेबमा पाउनुभयो।
उत्कृष्ट मोडेलहरूको साथ हाम्रा गाइडहरूलाई नछुटाउनुहोस्, हामी तपाईंलाई बताउँछौं कि तिनीहरू कसरी काम गर्छन्, ती व्यक्तिहरूको राय जसले तिनीहरूलाई पहिले नै प्रयास गरिसकेका छन् र तिनीहरूलाई कहाँबाट किन्ने। सबै भन्दा राम्रो मूल्य स्पेनमा अनलाइन।
सबैभन्दा बढी चाहियो
अहिलेको सबैभन्दा राम्रो के हो?
तेल बिना तुलनात्मक फ्राइर
यसलाई कसरी छनौट गर्ने र के खोज्ने?
तेल-रहित फ्राइर कसरी काम गर्दछ?
हट एयर फ्रायर मूल्य
तिनीहरू अहिले केही वर्षको लागि बजारमा छन्, तर अझै पनि धेरै व्यक्तिहरू छन् जसले यो सानो उपकरणको बारेमा शंका गर्छन्। यदि तपाईं यहाँ हुनुहुन्छ भने, यो किनभने तपाईं तिनीहरूमा रुचि राख्नुहुन्छ, तर तपाईं निश्चित हुनुहुन्न तिनीहरूले के परिणाम दिन्छन् र यदि तिनीहरू यसको लायक छन् र तिनीहरू तपाईंको घरको लागि उपयुक्त छन्। पढिरहनुहोस् र सबैभन्दा पूर्ण जानकारी पत्ता लगाउनुहोस् र निष्पक्ष
हामी सुधार गर्न चाहन्छौं र हामीले तपाईंलाई मद्दत गरेका छौं भने जान्न चाहन्छौं, त्यसैले कुनै पनि टिप्पणी स्वागत छ, यो महत्वपूर्ण भए पनि, हामीलाई एक मिनेट दिनुहोस् 🙂
➤ उत्तम तेल-रहित फ्राइरहरूको तुलना
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भिन्नताहरू हेर्नको लागि छिटो र सजिलैसँग तुलना गर्नुहोस् र कुन हो भनेर निर्णय गर्नुहोस् तपाइँको घर को आवश्यकताहरु को लागी राम्रो उपयुक्त।
एयर फ्राइर XL
Cecofry डिलक्स रैपिड
१ 800। ग्रामहरू
2 खाना पकाउने क्षेत्रहरू
➤ बजारमा सबैभन्दा राम्रो तेल-रहित फ्राइर के हो?
कुन उत्तम हो भन्ने निर्णय गर्नु हाम्रो हातमा छैन, किनकि प्रत्येक प्रयोगकर्ताको प्राथमिकताहरू छन् जसले छनोट निर्धारण गर्छ ।
हामी के भन्न सक्छौं कि मोडेलहरू बाँकी भन्दा माथि उभिन्छन्, या त तिनीहरूको प्रदर्शनको लागि, तिनीहरूको कम लागतको लागि वा पैसाको लागि उत्तम मूल्यको लागि।
हामी पहिले देख्नेछौं सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सुविधाहरू बजारमा सबै भन्दा राम्रो उपकरणहरू र एक चयन तल अन्य विशेष मोडेलहरू।
हामी तिनीहरूलाई कसरी छनौट गर्छौं?
▷ फिलिप्स एयरफ्रायर HD9280 / 90
मूल्य फिलिप्स HD9220/20
परिवारका लागि XL एयर फ्रायर: 6,2 लिटर कचौरा र 1,2 किलोग्राम ठूलो टोकरी5भागहरू सम्म - टच स्क्रिनको साथ7पूर्व-सेट खाना पकाउने कार्यक्रमहरू
पकाउने एक स्वस्थ तरिका: 90% सम्म कम फ्याट भएको स्वादिष्ट र पौष्टिक खाना - फ्राइ, बेक, ग्रिल, रोस्ट र एयर फ्रायरहरूमा विश्वव्यापी नेतासँग पुन: तताउनुहोस्**
निजीकृत व्यञ्जनहरू: तपाईंको प्राथमिकताहरू अनुरूप स्वस्थ जीवनको लागि प्रेरणादायक रेसिपीहरू फेला पार्न हाम्रो NutriU एप डाउनलोड गर्नुहोस् - तिनीहरूलाई सजिलैसँग चरण-दर-चरण पछ्याउनुहोस्।
बाहिरी भागमा क्रिस्पी, भित्री भागमा कोमल: अद्वितीय तारा आकारको डिजाइन भएको र्यापिड एयर टेक्नोलोजीले स्वादिष्ट क्रिस्पी र कोमल खानाहरूका लागि इष्टतम तातो हावा परिसंचरण सिर्जना गर्दछ।
सहज सफाई: हटाउन सकिने डिशवाशर-सुरक्षित भागहरू भएको एयरफ्रायर
✅ विशेष एयरफ्रायर सुविधाहरू
6.2 लीटरको क्षमता
2000 W शक्ति
रैपिड एयर टेक्नोलोजी
एनालग समय र तापमान नियन्त्रण
डिशवाशर सुरक्षित भागहरु
खरीददारहरूबाट राम्रो प्रतिक्रिया
मान्यता प्राप्त र अनुभवी ब्रान्ड
यद्यपि त्यहाँ धेरै मोडेलहरू छन् जुन धेरै राम्रोसँग बेच्छन्, मान्यता प्राप्त ब्रान्डहरूमा बिक्री नेताहरू मध्ये एक हो फिलिप्स HD9280 / 90 Airfryer परिवार बाट।
यो उपकरण, यी उपकरणहरूको सामान्य विनिर्देशहरूको अतिरिक्त, छ द्रुत वायु प्रविधि। खाना पकाउनको लागि डिजाइन गरिएको एक पेटेंट फिलिप्स प्रविधि धेरै थोरै तेलको साथ समान रूपमा।
Tefal Actifry2in 1 मूल्य
विशेष 2-in-1 तातो हावा फ्राइर दुई पकाउने क्षेत्रहरू एकै पटक सम्पूर्ण खाना तयार गर्न; उत्पादनमा सीधा अतिरिक्त ग्रिल प्लेट समावेश गर्दछ
घुमाउने स्टिरर हातको साथ तातो हावा परिसंचरण स्वचालित तापक्रम नियन्त्रणको साथ भुटेको खानालाई हल्का पकाउने, कम फ्याट फ्राइलाई सक्षम बनाउँछ; सटीक खाना पकाउने परिणामहरूको लागि समायोज्य तापमान 80 देखि 220 डिग्री सेल्सियस
9 स्वचालित प्रोग्रामहरू सीधा स्क्रिनमा ठूलो टच सतहको साथ; ढिलो सुरु9घण्टा सम्म र न्यानो प्रकार्य राख्नुहोस्
ढक्कन खोल्दा स्वचालित रोक्नुहोस्, सबै कम्पोनेन्टहरू (ActiFry कचौरा, ग्रिल, ढक्कन) हटाउन सकिने र डिशवाशर सुरक्षित छन्; संकेत टोन संग टाइमर
Tefal YV9708 ActiFry Genius XL 2in1 बक्समा के छ, हटाउन सकिने कचौरा र ग्रिल प्लेट, हटाउन सकिने ढक्कन, नाप्ने चम्चा, प्रयोगकर्ता पुस्तिका
✅ Tefal Actifry हाइलाइटहरू
1.5 किलोग्रामको ठूलो क्षमता: 4/5 सर्भरहरू
1400 W शक्ति
दुई खाना पकाउने क्षेत्रहरू
LCD संग डिजिटल प्रोग्रामर
4 याद गरिएको मेनु
10 वर्षको लागि मर्मत योग्य
हाल एयर फ्राइरसँग दुई खाना पकाउने क्षेत्र सबै भन्दा राम्रो बिक्री छ Tefal Actifry2in 1। यस मोडेलमा सबैभन्दा बाहिर खडा हुने विशेषताहरू मध्ये एक खाना पकाउने सम्भावना हो एकै समयमा दुई खाना.
यो पनि समावेश घुमाउने स्कूप जसले खाना हटाउँछ स्वचालित रूपमा र हातले गर्नबाट बच्न। यसको मूल्य केही उच्च छ, यद्यपि यसमा सामान्यतया राम्रो छुटको साथ प्रस्तावहरू छन्।
Cecofry 4D मूल्य
खाना पकाउने प्रणाली भएको अभिनव डाइटेटिक फ्राइर जसले माथिबाट, तलबाट वा एकैसाथ माथि र तलबाट खाना पकाउन अनुमति दिन्छ, खानालाई 360º वरिपरि राख्छ र समान रूपमा तातो वितरण गर्दछ।
अटोमेटिक फ्राइर जसले प्रयोग गर्न र बुझ्न सजिलो बनाउन ८ प्रि-सेट प्रोग्रामहरू सहित कुनै पनि तेलले पकाउँछ: साउटे, टोस्ट, फ्रेन्च फ्राइज, ओभन, म्यानुअल, फ्राइङ प्यान, चामल र दही। यसले स्वचालित रूपमा हलचल गर्नको लागि फावडा समावेश गर्दछ जसको साथ तपाईले थोरै प्रयास र ह्यान्डल, दुबै हटाउन सकिने गरी पकाउन सक्नुहुन्छ।
100 देखि 240º सम्मको टाइमरको साथ समायोज्य तापमान डिग्री जुन5देखि 90 मिनेट सम्म काम गर्दछ सबै सम्भावित व्यंजनहरू पकाउन। यसमा 60 मिनेट देखि0घण्टा सम्म कन्फिगर गर्न मिल्ने 16ºC को पूर्वनिर्धारित तापमानमा दही पकाउन सक्षम हुने मेनु समावेश छ।
योसँग ग्रिडको लागि दुई स्तरहरूमा एकै समयमा दुईवटा भाँडाहरू पकाउन सक्षम हुने विकल्प छ, धेरै समयको सदुपयोग गर्दै, एकै समयमा धेरै तयारीहरू संयोजन गर्न सक्षम हुँदै। यसमा तीन-लेयर स्टोन सिरेमिक कोटिंग सहितको 3-लिटर क्षमताको कचौरा छ जसले 3,5 केजीसम्म पकाउन सक्छ। आलुको, खानालाई तल्लो भागमा टाँसिनबाट रोक्न।
यस क्रान्तिकारी उपकरणसँग कसरी खाना पकाउने भनेर सिक्नको लागि 40 रेसिपीहरू र यस आहारको साथ पकाउन कत्ति सरल छ भिडियो ढाँचामा हेर्नको लागि 8 अतिरिक्त भिडियो रेसिपीहरू सहित विभिन्न परिकारहरू सजिलै पकाउन सक्षम हुन एउटा म्यानुअल र एउटा रेसिपी पुस्तक समावेश छ। फ्राइर मोडेल। कुनै पनि परिकारलाई कुशलतापूर्वक पकाउनको लागि यसमा 1350 W को शक्ति छ। फ्राइरको मापन हो: 31 x 39 x (ह्यान्डलको साथ 47 सेमी) x 23 सेमी।
Cecotec स्टोर सम्झौता हेर्नुहोस्
✅ Cecofry 4D हाइलाइटहरू
1350 W शक्ति
दुई स्वतन्त्र ताप क्षेत्र
२ स्तरहरूमा भान्सा
छुट्याउन सकिने रोटरी फावडा
8 पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमहरू
स्पेनिस ब्रान्ड सेकोटेकले हट एयर फ्राइर बजारमा ल्याउँछ बजारमा सबैभन्दा पूर्ण र बहुमुखी अहिले सम्म। यसको क्षमता एकै समयमा दुईवटा खाना पकाउनुहोस्, तपाईंको रोटरी फावडा खाना हलचल गर्न हटाउन योग्य र यसको पूर्ण डिजिटल नियन्त्रण।
तर त्यो सबै होइन, द टर्बो सेकोफ्री 4D एक मात्र हो दुई ताप उत्सर्जनकर्ताहरू छन्, एउटा तल्लो र एउटा माथिल्लो, जो स्वतन्त्र छन् र सँगै वा अलग रूपमा सक्रिय गर्न सकिन्छ।
▷ राजकुमारी तेल रहित फ्रायर
Aerofryer XL मूल्य
✅ एरोफ्रायर हाइलाइटहरू
क्षमता 3.2 लिटर: 4/5 सर्भिङ
विभिन्न कार्यक्रमहरूको साथ डिजिटल नियन्त्रण
मान्यता प्राप्त ब्रान्ड
यदि तपाइँ संग एक मोडेल खोज्दै हुनुहुन्छ पैसाको लागि राम्रो मूल्य तपाईंले यो स्वस्थ फ्राइरलाई विचार गर्नुपर्छ। यसको सामान्य बिक्री मूल्य लगभग 125 यूरो हो तर सामान्यतया छूट छ जसले यसलाई लगभग ९० युरो राख्यो। हामीले वेबमा गरेको विश्लेषणमा तपाईले देख्न सक्नुहुने थोरै भिन्नता भएका यन्त्रका दुई संस्करणहरू छन्।
यो राम्रो सामान्य विशिष्टता संग एक उपकरण हो ठूलो स्वीकृति पाएको छ खरीददारहरू बीच, जसले यसलाई राम्रो मूल्याङ्कन पनि दिन्छ। यसको माथिको औसत क्षमता, शक्ति र यसको विभिन्न कार्यक्रमहरूको साथ डिजिटल नियन्त्रणहरू।
यदि तपाइँ यसलाई रोज्नुहुन्छ भने तपाइँ सफाईको बारेमा चिन्ता लिनु पर्दैन, किनभने यो डिशवाशर मा धुने को लागी उपयुक्त छ। तपाईले देख्न सक्नुहुने रूपमा, यसले केहि पनि कमी गर्दैन, र प्रयोगकर्ताहरूको राम्रो रायको साथ यसले यसलाई खडा बनाउँछ सबै भन्दा राम्रो गुणस्तर मूल्य संग मोडेल बीच.
फ्राई डिलाइट मूल्य
4 खाना पकाउने मोडहरूसँग स्वस्थ किचन फ्राइर: फ्राइ, ग्रिल, रोस्ट, बेक र ग्रेटिन; आफ्नो खानामा बोसो र तेल कम गर्नुहोस्
800 ग्राम क्षमता3वा4व्यक्तिहरूका लागि उपयुक्त 500 ग्राम फ्रिज फ्रिज 15 मिनेटमा 200 डिग्री सेल्सियसमा पूर्व तताउने समय सहित
30 मिनेट समायोज्य टाइमर प्रयोग गर्न सजिलो
फ्राइ गर्दा थोरै वा बिना तेल प्रयोग गरेर स्वस्थ फ्राइङ, तपाईंले स्वस्थ र स्वादिष्ट परिकार पकाउनुहुनेछ
गन्धले घर नभरी तपाईंको स्वस्थ फ्राइड खानाहरूको आनन्द लिनुहोस्
✅ विशेष सुविधाहरू फ्राई डिलाइट
800 Grs क्षमता: 2/3 सर्भिङ
मर्मत योग्य उत्पादन 10 वर्ष
यो स्वस्थ फ्रायर अर्को मोडेल हो जुन अवस्थित छ पैसा को लागी सबै भन्दा राम्रो मूल्य बीच। यसको pvp 150 यूरोको नजिक छ तर सबैभन्दा सामान्य यो हो कि यसमा पर्याप्त छुट छ र करीव १ 100,०० युरो.
यो एक सन्तुलित यन्त्र हो जसमा यसको कार्य पूर्ण रूपमा प्रदर्शन गर्न र प्राप्त गर्न पर्याप्त विशिष्टताहरू छन् तपाईंको खरीददारहरूको सन्तुष्टि। सबैभन्दा उल्लेखनीय कुरा यसको हो प्रयोग गर्न सजिलो, तपाईंको डिजाइन र के हो टिक्नको लागि निर्मित र ब्रेकडाउनको अवस्थामा मर्मत गर्न सक्षम हुन।
▷ Cecotec Cecofry कम्प्याक्ट र्यापिड
फ्राइर मूल्यहरू कम्प्याक्ट र्यापिड
आहार फ्राइर जसले एक चम्मच तेलले खाना पकाउन अनुमति दिन्छ, स्वस्थ परिणामहरू प्राप्त गर्दछ। PerfectCook तातो हावा प्रविधिको लागि धन्यवाद सबै रेसिपीहरूमा असाधारण परिणामहरू।
टोकरी समावेश छ। एक पटकमा 400 ग्राम आलु पकाउनुहोस्। समय र तापमान मा प्रोग्रामेबल।
यसमा 200 ºC सम्म थर्मोस्टेट छ।0देखि 30 मिनेट सम्म समायोज्य समय।
1,5 लिटर क्षमता कन्टेनर।
पूर्ण कुकबुक समावेश गर्दछ।
✅ कम्प्याक्ट र्यापिड हाइलाइटहरू
1.5 लिटर क्षमता:2सर्भर अधिकतम
900 W शक्ति
एनालग थर्मोस्टेट र टाइमर
सायद aliexpress मा तपाईले सस्तो पाउनुहुनेछ, तर यदि तपाई चाहनुहुन्छ भने थोरै पैसा खर्च गर्नुहोस् एयर फ्राइरमा हामी सिफारिस गर्छौं Cecotec द्वारा Cecofry कम्प्याक्ट र्यापिड। पक्कै पनि तपाईं एक चीन छनोट गरेर र को यस मोडेलमा बढी बचत गर्नुहुन्न स्पेनिश कम्पनी तपाईंसँग दुई वर्षको वारेन्टी छ।
यद्यपि ब्रान्डले लगभग ७५ युरोको आरआरपी घोषणा गर्दछ, यसमा सामान्यतया छुट हुन्छ जुन यसलाई राख्छ। लगभग ११,००० युरो। यस मूल्यमा त्यहाँ कुनै बहाना छैन यदि तपाईं लगभग कुनै तेल बिना पकाउन चाहनुहुन्छ र तातो हावा प्रविधि प्रयास गर्नुहोस्।
▷ सबै भन्दा राम्रो ब्रान्ड के हो?
हाल यी हुन् चार उत्कृष्ट ब्रान्डहरू यसको फराकिलो क्याटलगको लागि थोरै तेलको साथ फ्रायरहरूमा र हुनको लागि सबै भन्दा राम्रो बिक्री मोडेल स्पेनमा।
यदि तपाइँ तिनीहरूको उत्कृष्ट उपकरणहरू र प्रत्येक कम्पनीको हाइलाइटहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने छविमा क्लिक गर्नुहोस्।
फिलिप्स एयरफ्रायर तेल फ्री फ्रायरहरू
Cecotec Cecofry तेल फ्री फ्रायर
Tristar तेल फ्री फ्रायर
Tefal तेल फ्री फ्रायर
➤ अन्य विशेष हट एयर फ्रायरहरू
हाम्रो समीक्षाहरू पहुँच गर्नुहोस्, तिनीहरूमा हामी विस्तृत रूपमा अन्य मोडेल विश्लेषण स्पेनिश बजार मा चित्रित।
तपाईंले पत्ता लगाउनुहुनेछ फाइदाहरू र हानिहरू, प्रयोगकर्ताहरूको राय जसले पहिले नै तिनीहरूसँग पकाएको छ र तपाईं कहाँ किन्न सक्नुहुन्छ तपाईको उत्तम मूल्यमा।
Vpcok तेल फ्री फ्राइर
Moulinex Easy Fry Deluxe EZ401D तेल फ्री फ्रायरहरू
Lidl तेल फ्री फ्राइर
कोसोरी तेल फ्री फ्रायर
फ्रीमेटिक डाइट फ्राइर
Tefal Actifry एक्सप्रेस स्नैकिंग
Aicok तेल फ्री फ्राइर
तेल-रहित फ्राइर के हो
यो सफल घरेलु उपकरण मध्ये एक भएको छ। किनभने तिनीहरूले सबै प्रकारका व्यञ्जनहरू तयार गर्न सक्छन्, या त पहिलो वा दोस्रो पाठ्यक्रमहरू र डेसर्टहरू, तर तेल बिना वा यसको मात्र एक चम्मच संग। çयो यो तथ्यको लागि धन्यवाद हो कि तिनीहरू नयाँ समावेशी टेक्नोलोजीको साथ आउँछन्, जुन यो तथ्यमा आधारित छ कि यो उच्च तापक्रम र उच्च गतिमा घुम्ने हावा हुनेछ। यसले हामीलाई थाहा छ कि खानामा कुरकुरा फिनिश हुन्छ, तर उच्च मात्रामा तेल थप्नु बिना।
➤ कुन तेल फ्री फ्राइर किन्न?
COSORI फ्राइर बिना ...
स्पेनमा Tefal, Philips, Princess, Cecotec जस्ता प्राविधिक सेवाहरू प्रदान गर्ने ब्रान्डहरू खरिद गर्ने हाम्रो सिफारिस हो ... ध्यान राख्नुहोस् कि तिनीहरू बन्द छन् र कम्प्याक्ट उपकरणहरू उच्च तापक्रमको अधीनमा छन् र धेरै पीडा भोग्छन्, त्यसैले तपाईंले जहाँ भएको प्रशंसा गर्नुहुनेछ। यसलाई मर्मत गर्न वा आवश्यक भएमा स्पेयर पार्ट्स कहाँ किन्न। बूमको साथ, धेरै सेतो ब्रान्डहरू बाहिर आएका छन् जसमा SAT छैन र केही ब्रान्ड मोडेलहरूसँग मूल्य भिन्नता त्यति धेरै छैन।
▷ कुन रोज्ने? महत्त्वपूर्ण पक्षहरू
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारकहरू एयर फ्रायर छनोट गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू हुन्:
साना मोडेलहरू बेचिन्छन्, जोडीहरू वा एकलहरूका लागि आदर्श, र सम्पूर्ण परिवारका लागि ठूला मोडेलहरू, त्यसैले तपाईंले यसलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ र तपाईको आवश्यकता अनुसार उपयुक्त हुने क्षमता छान्नुहोस्।
यो छोटो हुनु अघि शक्तिशाली फ्राइर किन्न राम्रो छ, किनकि यो केहि फरक पार्न सक्छ गुणस्तर र खाना पकाउने समय। कुनै पनि अवस्थामा, एक उच्च शक्ति एक संकेत होइन कि यो अधिक प्रभावकारी छ, किनभने यो यन्त्रले त्यो शक्ति प्रयोग गर्ने तरिकामा निर्भर गर्दछ।
✅ सजिलो सफाई
यसलाई धुन सजिलो बनाउनुहोस् तपाईंले पहिले सोच्नुभन्दा यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो, यदि सफाई बोझिलो र जटिल छ भने, तपाईंले दागबाट बच्न यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न।
मूल्य सामान्यतया कुनै पनि खरिदमा खातामा लिनको लागि एक कारक हो, सौभाग्यवश तपाईंसँग सबै मूल्यहरू छन्, उत्कृष्ट ब्रान्डहरूमा पनि।
✅ खरीददारहरूको समीक्षा
तपाइँको खरिद अधिकार प्राप्त गर्न को लागी एक राम्रो तरिका हो पहिले नै प्रयास गरिसकेका खरीददारहरु को राय पढ्नु हो। समीक्षाहरू पढ्न प्रयास गर्नुहोस् र अंक मात्र नहेर्नुहोस्, वास्तविकतालाई राम्रोसँग प्रतिबिम्बित गर्ने प्रवृत्ति हुन्छ।
✅ अन्य महत्त्वपूर्ण सुविधाहरू
यद्यपि माथिका कारकहरू सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आधारभूत हुन्, त्यहाँ धेरै सुविधाहरू छन् जुन धेरै सुधार गर्न सकिन्छ प्रयोगकर्ता अनुभव र खाना पकाउने परिणामहरू.
विभिन्न खाना पकाउने स्तरहरू
खाना हटाउनको लागि घुमाउने स्कूप
विभिन्न गर्मी क्षेत्रहरू
तेल-रहित फ्राइरहरूको फाइदाहरू
यदि हामीले पहिले नै उल्लेख गरेका छौं कि यो एक सफल विचार भन्दा बढि हो, अब हामीले यसको मुख्य फाइदाहरू के हो भनेर जान्नुपर्दछ, जुन हामीलाई जित्ने अन्त हुनेछ:
धेरै स्वस्थ व्यंजनहरू: यो सत्य हो कि कहिलेकाहीँ, हाम्रो जीवनको गतिले गर्दा, हामी सन्तुलित खाना खान छोड्दैनौं। यसले हाम्रो शरीरमा बोसोको ठूलो भाग लिने, जुन क्यालोरीमा परिणत हुन्छ, छिटो र नराम्रोसँग खाने गर्छ। तसर्थ, तेल-रहित फ्राइरले स्वस्थ व्यंजनहरू प्राप्त गर्नेछ, यी बोसोहरू 80% भन्दा बढी घटाउँछ।
यसले भान्सामा तपाईंको समय बचत गर्नेछ: गहिरो फ्राइरहरू सबैभन्दा छिटो उपकरणहरू मध्ये एक हो। त्यो हो, केही मिनेटमा, हामीसँग तयार र स्वादिष्ट व्यञ्जन हुनेछ। त्यसोभए यसले भान्सामा धेरै समय बिताउन वा समय नियन्त्रण गर्नबाट बच्न सक्छ। यस अवस्थामा, तपाईंले खाना र यसको खाना पकाउने समयको आधारमा आवश्यक प्रोग्रामिङ गर्न सक्नुहुन्छ।
कम ऊर्जा खर्च: यो ती उपकरणहरू मध्ये एक हो जसले धेरै प्रकाश प्रयोग गर्दैन। त्यसैले यस अवस्थामा हामी यसलाई ओवनसँग तुलना गर्न सक्छौं।
टाइमर समावेश गर्नुहोस्: खानाको बारेमा चिन्ता नगर्नुहोस्, किनकि टाइमरको साथ, यो तयार हुँदा तपाईंलाई सूचित गरिनेछ। न त तपाईले तापमानको बारेमा चिन्ता गर्नु पर्छ किनभने तिनीहरूसँग सामान्यतया तापमान नियामक हुन्छ।
तिनीहरू प्रयोग गर्न धेरै सजिलो छन्: यो सत्य हो कि हरेक पटक हामीले कुनै यन्त्र किन्दा हामीलाई प्रयोग गर्न गाह्रो हुन्छ कि भन्ने डर हुन्छ, तर त्यस्तो होइन। तिनीहरूसँग सटीक सेटिङहरू बनाउन डिजिटल नियन्त्रण छ।
सफा गर्न सजिलो: यो हामी बारम्बार प्रयोग गर्ने उपकरण हुनेछ, हामी यसलाई सफा गर्न सजिलो हुनु आवश्यक छ र यो छ। यसको भागहरू हटाउन र डिशवाशरमा धुन सकिन्छ। यद्यपि यदि तपाइँ यसलाई हातले मनपर्छ भने, तपाइँ यसलाई हल्का साबुन र स्पन्जले गर्नुहुनेछ।
खाना पकाउँदा नराम्रो गन्धलाई अलविदा भन्नुहोस्: अर्को ठूलो फाइदा यो हो कि तपाईको भान्छामा घण्टौंसम्म नराम्रो गन्ध छैन वा अन्य प्रकारका उपकरणहरूसँग देखा पर्न सक्ने धुवाँ छैन।
कुन राम्रो छ, तेल बिना फ्राइर कि तेल संग?
यो सत्य हो कि त्यहाँ धेरै शंकाहरू छन्, तर हामी तिनीहरूलाई छिट्टै हटाउनेछौं। किनभने व्यापक रूपमा भन्नुपर्दा हामी अभ्यस्त वा अभ्यस्त छौं तेलको साथ फ्राइरहरू। तर तिनीहरूमा हामीले थप क्यालोरीहरू उपभोग गर्नेछौं भन्ने तथ्यको साथसाथै भनिएको तेलको खर्च पनि छ र यो हाम्रो स्वास्थ्यले हामीलाई धन्यवाद दिने कुरा होइन। यस कारणका लागि, तेल-रहित फ्राइरहरू स्वस्थ छन् र हामीलाई अनन्त व्यंजनहरू सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ।
त्यसोभए, तिनीहरूसँग भएका सबै सुविधाहरूको लागि, हामी सधैं तिनीहरूसँग रहनेछौं, तर हो, यद्यपि परिणामहरू उत्तम छन्, यो सत्य हो कि तिनीहरूमध्ये कतिपयले तेलको रूपमा कुरकुरा समाप्त गर्दैनन्। तपाई कुन रोज्नुहुन्छ?
गहिरो फ्राइरले तेल बिना के गर्न सक्छ
फ्राइ: तार्किक रूपमा गहिरो फ्राइरको कुरा गर्दा, हामी फ्राइड पकाउने आशा गर्छौं। खैर, यो मामिलामा उनी पछि हट्ने थिएनन्। तपाईं केही फ्रेन्च फ्राइजको साथसाथै क्रोकेट वा स्टेक जस्ता रोटी खानाको मजा लिन सक्नुहुन्छ। तर यो हो कि भुटेको अण्डा पनि तेल बिना गहिरो फ्राइर को मेनु मा एक स्थान छ। नतिजा अचम्मको भन्दा बढी छ र तपाइँ यसलाई माया गर्न जाँदै हुनुहुन्छ।
तताएको पाउरोटी: निस्सन्देह, प्रत्येक खानाको समाप्तिले यसको स्वादको बारेमा धेरै बताउनेछ र हामी कडाईका साथ हाम्रो स्वादको पालना गर्नेछौं। त्यसैले, यदि तपाइँ एक मनपर्छ भने खानालाई बाहिरबाट अलिकति कुरकुरा बनाउँछ तर एक रसदार र चिल्लो भित्री संग, त्यसपछि तपाईं तेल बिना आफ्नो फ्राइर मा यो प्रकार्य मा शर्त गर्न सक्नुहुन्छ। उदाहरण को लागी, मासु, उदाहरण को लागी, एक सामाग्री हुनेछ कि तपाईलाई धेरै धन्यवाद दिनेछ।
बेक गर्नुहोस्: त्यहाँ धेरै पटक हामी कसरी हेर्छौं तेल बिनाको फ्राइरलाई चुलोसँग तुलना गरिन्छ। यो किनभने यो पनि हावा हो जुन खाना र्‍याप गर्न उच्च गतिमा घुम्छ। त्यसैले यो सबैभन्दा लोकप्रिय खाना पकाउने विधिहरू मध्ये एक हो। तर न केवल केहि मुख्य व्यंजनहरु को लागी, तर डेसर्ट बनाउन को लागी।
आसा: तेलरहित फ्राइरको कुरा गर्दा उत्तम रोस्ट पहिले नै अवस्थित छ। सोच्दै हुनुहुन्छ भने ग्रिल वा बारबेक्यू को रूप मा व्यंजन को एक श्रृंखला तयार, त्यसपछि तपाईंले यो प्रकार्य प्रयोग गर्नुपर्छ। किनभने परिणाम पनि अचम्मको छ। यद्यपि पहिलो व्यञ्जनहरू मासुमा मात्र बाँच्दैनन्, तर तपाईं माछा वा रोस्ट आलु पनि रोज्न सक्नुहुन्छ।
Cocer: हामीले पहिले नै उल्लेख गरिसकेका छौं कि यसलाई तेल चाहिँदैन र जब हामी केहि खाना पकाउँछौं, पनि छैन। यो सबैभन्दा लोकप्रिय खाना पकाउने विधिहरू मध्ये एक हो। किनभने यो बारेमा छ एक पूर्ण स्वस्थ विकल्प र यो हामीलाई मनपर्ने कुरा हो। थप रूपमा, यो आफैंको हेरचाह गर्न वा केही मौलिक तयारीहरू गर्न एकदम सही छ। तपाईले सोच्न सक्ने सबै कुरा!
➤ Air Fryers को प्रयोगकर्ता समीक्षा
पक्कै पनि तपाईं तातो एयर फ्राइरका प्रयोगकर्ताहरू के भन्छन् भनेर जान्न उत्सुक हुनुहुन्छ। धेरैजसोको राय राम्रो छ, यद्यपि त्यहाँ ती पनि छन् जो विश्वस्त छैनन्।
सन्तुष्ट नहुने प्रयोगकर्ताहरूले धेरैजसो गुनासो गर्छन् कि थोरै तेलमा फ्राइ गर्दा, खाना सामान्य भुटेको खाना जस्तै रहँदैन। यो तार्किक छ, तर तपाईंले दिमागमा राख्नु पर्छ।
तपाईले केहि पढ्न सक्नुहुन्छ खुसी भएका प्रमाणित खरीददारहरूबाट टिप्पणीहरू, वा तपाईंले गरेको परीक्षण खानेकुरा:
"मलाई मन पर्छ कि यसले तेललाई फिल्टर गर्छ र अर्को पटक सम्म यसलाई हावा बन्द राख्छ। ताप सहज र छिटो देखिन्छ। मैले विभिन्न रेसिपीहरू प्रयास गरेको छु र परिणामहरू सधैं राम्रो छन्। सबै कुरकुरा र राम्रोसँग खैरो छ र प्रयोग गरिएको तेल अत्याधिक लाग्दैन।"
"मैले पहिले कहिल्यै गहिरो फ्राइरको स्वामित्व लिएको थिइनँ र यसले कत्तिको राम्रोसँग काम गर्छ, वा यो कत्तिको फोहोर हुनेछ भन्नेमा धेरै शंकास्पद थिएँ। यो कुरा महान छ! मैले यससँग पखेटा बनाएको छु। सबै भन्दा राम्रो भाग यो तेल भण्डारण गर्न र पुन: प्रयोग गर्न कति सजिलो छ। प्रणाली पूर्ण रूपमा फोहोर मुक्त छ। फ्राइर टोकरी, कचौरा र माथि हटाउन र धुन सजिलो भएकोले सफाई धेरै सजिलो छ।"
"यस फ्राइरले तपाईलाई फ्राइङको कुनै पनि समस्या समाधान गर्नेछ। गन्ध र फोहोरको कारण फ्राइलाई घृणा गर्थे। यो गहिरो फ्राइर सफा गर्न जत्तिकै सजिलो छ यसलाई प्रयोग गर्न र यसलाई डिशवाशरमा राख्नको लागि। डिशवाशरमा जान नसक्ने एक मात्र भाग हीटरको भाग हो, जुन सिङ्कमा सजिलै सफा गरिन्छ। तेल निस्पंदन राम्रोसँग काम गर्दछ र फोहोर सिर्जना गर्दैन, मैले फ्रिजर, आलु, कुखुरा, आदिबाट फ्रिज गरिएको खाना सिधै फ्राइज गरेको छु।
"धेरै राम्रो! यसलाई पूर्ण रूपमा फ्राइ गर्न समय सेट गर्न थोरै अनुभव चाहिन्छ।
यो तेल बिना पूर्ण रूपमा काम गर्दैन, तर यो लामो जीवन गहिरो फ्राइर भन्दा राम्रो छ।
म चाहान्छु कि फरक तापमान सेट गर्न थप विकल्पहरू थिए। डिजिटल राम्रो हुन्थ्यो, तर यो मेरो प्रेमीबाट अचम्मको उपहार थियो, त्यसैले म गुनासो गर्न सक्दिन।
हाम्रो विचारमा यो चाहनेहरूको लागि राम्रो विकल्प हो आफ्नो आहार मा तेल कम "तलिएको" लाई पूरै त्याग नगरी। यो ओभनमा खाना पकाउन मन पराउनेहरूका लागि पनि राम्रो घरको उपकरण हुन सक्छ, तर यो अधिक सहज र सफा गर्न सजिलो छ कि फाइदा संग।
यदि तपाइँ यो सोचेर किन्नुहुन्छ भने तपाइँ परम्परागत मोडेलहरू जस्तै फ्राइ गर्न जाँदै हुनुहुन्छ यसले तपाईंलाई निराश गर्नेछअन्यथा तपाई पक्कै पनि धेरै प्रयोगकर्ताहरू जस्तै खरिदसँग खुसी हुनुहुनेछ।
यदि तपाईं तातो हावाको साथ खाना पकाउने प्रस्तावहरूबाट विश्वस्त हुनुहुन्न र तपाईं धेरै फ्राइ गर्न चाहानुहुन्छ भने, हेर्नुहोस् वाटर फ्राइर Movilfrit।
➤ तेल फ्री फ्रायरहरूको मूल्य
COSORI फ्राइर बिना ... सुविधाहरू हेर्नुहोस् १,०79.856। समीक्षा सम्झौता हेर्नुहोस्
4,5L तेल फ्री फ्राइर ... सुविधाहरू हेर्नुहोस् १,०158। समीक्षा सम्झौता हेर्नुहोस्
Aigostar Cube - Fryer... सुविधाहरू हेर्नुहोस् १,०2.550। समीक्षा सम्झौता हेर्नुहोस्
Cecotec Fryer बिना ... सुविधाहरू हेर्नुहोस् १,०262। समीक्षा सम्झौता हेर्नुहोस्
COSORI फ्राइर बिना ... सुविधाहरू हेर्नुहोस् १,०11.075। समीक्षा सम्झौता हेर्नुहोस्
COSORI फ्राइर बिना ... सुविधाहरू हेर्नुहोस् १,०14.504। समीक्षा सम्झौता हेर्नुहोस्
सबै भन्दा राम्रो	COSORI फ्राइर बिना ...
मूल्य गुणस्तर	4,5L तेल फ्री फ्राइर ...
हाम्रो मनपर्ने	Aigostar Cube - Fryer...
Cecotec Fryer बिना ...
कम तेल एयर फ्रायरहरूको लागि मूल्यहरू सामान्यतया छन् परम्परागत भन्दा उच्च। तैपनि, मूल्यहरूको विविधता ठूलो छ, र हामी 50 यूरो वरिपरि किफायती मोडेलहरू फेला पार्न सक्छौं, सबैभन्दा सुसज्जित पनि जुन 250 यूरोको वरिपरि छन्।
केही मोडेलहरूमा RRP उच्च भएता पनि, वर्षभरि प्रायः सबै ब्रान्डहरूमा राम्रो छुटसहित केही अफरहरू हुन्छन्। तपाईंले बटनमा क्लिक गरेर अहिले उत्कृष्ट प्रस्तावहरू हेर्न सक्नुहुन्छ।
ब्ल्याक फ्राइडे तेल फ्री फ्रायरहरू
▷ सबैभन्दा राम्रो बिक्रेताहरू के हुन्?
अमेजन स्पेन बेट्सलरहरूसँग प्रत्येक 24 घण्टामा स्वचालित रूपमा अद्यावधिक गरिएको सूची
छुट संगशीर्ष बिक्री
4,5L तेल फ्री फ्राइर ...
▷ तपाईंले डाइट फ्राइर कहाँ किन्न सक्नुहुन्छ?
तपाईं आफ्नो स्वस्थ फ्राइर भौतिक स्टोरहरूमा वा अनलाइन स्टोरहरूमा किन्न सक्नुहुन्छ, जहाँ तपाईंले थप विविधताहरू पाउनुहुनेछ। निस्सन्देह, तपाईंले lidl मा सिल्भरक्रेस्ट मात्र पाउनुहुनेछ, र यो सधैं उपलब्ध छैन।
अनलाइन खरिदहरूको लागि हामी स्पष्ट रूपमा Amazon सिफारिस गर्छौं, जसले हालका वर्षहरूमा हाम्रो र धेरै उपभोक्ताहरूको विश्वास कमाएको छ। पक्कै तपाइँ ई-वाणिज्य विशाल जान्नुहुन्छ, तर यदि छैन भने, हामी तपाइँलाई बताउनेछौं कारण यो एक उत्तम विकल्प हो:
ब्रान्ड र मोडेलहरूको ठूलो विविधता
राम्रो मूल्य र निरन्तर प्रस्तावहरू
छिटो र सस्तो ढुवानी
दुई वर्षको कानूनी वारेन्टी
अन्य खरीददारहरूको राय
तर सस्तो तेल-रहित फ्राइर किन्नको लागि थप ठाउँहरू छन्:
अमेजन: हामी सबैलाई थाहा छ, अनलाइन बिक्री विशालसँग सबै प्रकारका तेल-रहित फ्राइरहरू छन्। त्यसैले हामी विभिन्न मोडेलहरू, विशेषताहरू र तपाईंलाई आफ्नो दैनिक आवश्यकताहरूको लागि आवश्यक सबै चीजहरू फेला पार्न सक्छौं। तसर्थ, यति धेरै विविधताहरू बीच, यो सत्य हो कि मूल्यहरू पनि फरक हुन सक्छ, तपाइँलाई तपाइँको खरिदमा राम्रो पिच बचत गर्दै।
अंग्रेजी अदालत: ठूला ब्रान्डहरू पनि El Corte Inglés मा भेट्छन्। त्यसोभए हामी सबैभन्दा आधारभूत मोडेलहरू फेला पार्न जाँदैछौं, तर साइज वा समाचारको सन्दर्भमा कहिलेकाहीं सर्वश्रेष्ठ बिक्रेता पनि। मूल्यहरूको लागि, तपाइँ मोडेलहरूमा निर्भर गर्दै, अर्को भन्दा छुट पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
Lidl: The Lidl सुपरमार्केट यसले हामीलाई हरेक पाइलामा चकित पार्छ। किनभने यो जस्तो उपकरण समय समयमा तिनीहरूको क्याटलगमा देखा पर्दछ। हामीलाई नजिक ल्याउने एयर फ्रायरमा हामीले आफूलाई यसबाट टाढा लैजान आवश्यक पर्ने सबै कुराहरू छन्। यो साँच्चै सस्तो र प्रयोग गर्न सजिलो छ। तर यो यसको मात्र मोडेल होइन तर यसले अर्को हट एयर मोडेल पनि प्रस्तुत गरेको छ, जसमा9मा 1 विकल्पहरू छन्। तिनीहरूलाई हाम्रो आवश्यकता अनुसार समायोजन गर्न सक्षम हुन दुईवटा उत्तम विकल्पहरू छन्।
चौबाटोको: यस अवस्थामा, सबै भन्दा राम्रो विकल्पहरू पनि तपाइँ फेला पार्न जाँदै हुनुहुन्छ। तेल-रहित फ्राइर यसको वेबसाइटमा सबैभन्दा धेरै बिक्री हुने उपकरणहरू मध्ये एक हो र थप रूपमा, तपाइँ प्रसिद्ध ब्रान्डहरूमा छुटको मजा लिन सक्नुहुन्छ। कम्प्याक्ट मोडेलहरू देखि अन्य को लागि ओवन को चौडाई संग। मूल्यहरू ती सबैमा भिन्न हुनेछन् तर तपाईंले अझै पनि किफायती विकल्पहरू फेला पार्नुहुनेछ।
सेकोटेक: Cecotec ब्रान्ड बिस्तारै बढेको छ। एक आला सबैभन्दा अनुरोध गरिएको बीच बनाइएको छ, तिनीहरूका उत्पादनहरूको लागि धन्यवाद तिनीहरूसँग सबैभन्दा सफल प्रविधि छ। तसर्थ, तेल बिना फ्राइरको मामिलामा तिनीहरू पछाडि छोडिनेवाला थिएनन्। बस प्रविष्ट गर्नुहोस् यसको वेबसाइटमा तपाईले तपाइँलाई प्रदान गर्ने सबै कुरा हेर्न सक्नुहुन्छ, उत्पादनहरूको एक विस्तृत चयनमा र भान्साको लागि मात्र होइनa, तर सामान्यतया घरको लागि र तपाईको व्यक्तिगत हेरचाहको लागि पनि। तर त्यहाँ अझै धेरै छ, किनकि यसले तपाईंलाई व्यञ्जनहरूको चयन पनि प्रदान गर्दछ। हामीले अरू के माग्न सक्छौं?
मिडियामार्केट: Mediamarkt ले तपाइँलाई केहि धेरै व्यावहारिक मोडेल पनि प्रदान गर्दछ। सबै भन्दा माथि, यो प्रख्यात ब्रान्डहरूमा आधारित छ र यसमा एक छ पैसाको लागि राम्रो मूल्य। तपाइँ एक अधिक आधारभूत मोडेल वा यसको ओवन प्रकार्य भएको एक को लागी रोज्न सक्नुहुन्छ। दुबैले तपाइँको स्वस्थ खाना पकाउने र तपाइँलाई दैनिक आधारमा मद्दत गर्दछ।
यो प्रविष्टि मूल्याङ्कन गर्न क्लिक गर्नुहोस्!
(भोटहरू:7औसत: 3.3)
सस्तो तेल-रहित फ्राइर खोज्दै हुनुहुन्छ? तपाई कति खर्च गर्न चाहनुहुन्छ हामीलाई भन्नुहोस्
⭐ तेल फ्री फ्राइर
81 टिप्पणीहरू "तेल बिना फ्राइर: राय र कुन खरीद गर्ने"
19 / 08 / 2019 मा 01: 49
मेरो भाँडामा समस्या छ जब एक मिनेट बित्छ यसले मलाई E1 दिन्छ यसको मतलब के हो
21 / 08 / 2019 मा 08: 51
नमस्ते। म तपाईंलाई बताउन माफ गर्न चाहन्छु कि मोडेल थाहा नदिई यो असम्भव छ। सामान्यतया E1 भनेको त्रुटि एक हो र बारम्बार त्रुटिहरू खण्डमा म्यानुअलमा निर्दिष्ट गरिएको छ। भाग्य
09 / 07 / 2020 मा 17: 02
मलाई फ्रेन्च फ्राइज, बेकन, कुखुरा र टोस्टेड तरकारी मन पर्छ, तर स्वास्थ्यको कारणले गर्दा, प्रशस्त तेलबाट बच्न, र त्यसैले, तेल-रहित फ्राइरको विकल्प, घरमा खाना पकाउनको लागि उपयोगी, व्यावहारिक र दैनिक विकल्प।
थप रूपमा, सफा गर्न र समय बचत गर्न सजिलो, हामी भिट्रोमा पहिलो पाठ्यक्रम र एयर फ्राइरमा दोस्रो पाठ्यक्रम पकाउँछौं।
के राम्रो सुनिन्छ? खैर, तपाईं अझ राम्रो थाहा छ।
09 / 07 / 2020 मा 17: 04
यो राम्रो सुनिन्छ र यो निश्चित रूपमा राम्रो स्वाद छ, हाहा। सहभागी हुनु भएकोमा धन्यवाद। अभिवादन
09 / 07 / 2020 मा 17: 33
म पनि तिनीहरूलाई माया गर्छु, तर मेरो आहारले मलाई रोक्छ, र 1 वर्ष भन्दा बढि मैले भुटेको खाना खाएको छैन। ???? तेल रहित फ्राइरको लागि कुनै सुझाव छ? धन्यवाद
09 / 07 / 2020 मा 17: 38
नमस्ते Ana। तपाईंसँग वेबमा छनौट गर्न धेरै विकल्पहरू छन्। यदि बजेट राम्रो छ भने हामी Tefal सिफारिस गर्छौं र यदि यो दराजमा कडा राजकुमारी वा मौलिनेक्स छ र हलचल प्याडल र थप सुविधाहरूको साथ सेकोटेक। अभिवादन
09 / 07 / 2020 मा 17: 51
Tefal वा COSORI?
09 / 07 / 2020 मा 20: 58
Cosori सँग राम्रो उत्पादनहरू छन् र यदि तपाइँ दराज मोडेलहरू मनपर्छ भने एक राम्रो विकल्प हो। समस्या यो हो कि स्पेनमा हाल कुनै शनि छैन। एक राम्रो विकल्प पनि Tristar हो, जुन नेदरल्याण्ड्स को राजकुमारी को रूप मा उही समूह को हो। अभिवादन
18 / 07 / 2020 मा 21: 49
गहिरो फ्रायरहरूमा बनाउनको लागि मेरो मनपर्ने खाना स्क्विड हो
13 / 07 / 2020 मा 15: 08
मेरो मनपर्ने फ्राइड डिश फ्रेन्च फ्राइज हो।
14 / 07 / 2020 मा 12: 28
फ्राइ गर्नको लागि मेरो मनपर्ने परिकार क्रोकेट हो।
15 / 07 / 2020 मा 20: 10
मेरो मनपर्ने पकवान प्याज रिंग र ह्याक स्टिकहरू हो। ओह र चिकन नगेट्स पनि।
म स्वस्थ र सजिलो पकाउनको लागि यस्तो गहिरो फ्राइर प्राप्त गर्न चाहन्छु।
क्लारा डे लास हेरास
16 / 07 / 2020 मा 09: 01
मेरो मनपर्ने फ्राइड डिश कोड फ्रिटर हो
17 / 07 / 2020 मा 11: 04
मसालेदार चिकन स्टिकहरू। र सुकेको फल। मैले केहि एयर फ्रायर पढेको छु जसमा त्यो प्रकार्य हुन सक्छ
20 / 07 / 2020 मा 00: 10
मलाई स्वस्थ कुखुरा र चिप्स पकाउन मन पर्छ!
11 / 08 / 2020 मा 13: 34
मलाई मनपर्ने तरकारीहरू टेम्पुरामा पकाइन्छ।
जे कार्लोस इग्लेसियास हेरान्ज
20 / 07 / 2020 मा 11: 46
फ्राइरमा मेरो मनपर्ने परिकार कुखुरा र विशेष गरी पखेटा हो।
20 / 07 / 2020 मा 11: 57
केही चोपिटो वा केही फीता।
30 / 07 / 2020 मा 19: 36
पनीरले भरिएका केही स्वादिष्ट टेक्वेनोहरू (तिनीहरू भेनेजुएलाका सामान्य हुन् र भुटेका हुन्छन्) खाँदा म थाक्ने छैन, यदि मैले फ्राइर जितें भने म तपाईंलाई घरमा खान निम्तो दिन्छु।
31 / 07 / 2020 मा 10: 58
हाहा, त्यो घुसखोरी मान्न सकिन्छ। भाग्य
20 / 07 / 2020 मा 12: 09
नमस्ते!! मेरो मनपर्ने फ्राइड डिश: आलु, प्याड्रोन मिर्च, एन्कोभिज, चिकन ड्रमस्टिक्स, चिकन पखेटा ... मलाई फ्राइड मन पर्छ!
20 / 07 / 2020 मा 21: 28
मेरो मनपर्ने परिकार फ्रेन्च फ्राइज हो
23 / 07 / 2020 मा 10: 16
मेरो मनपर्ने पकवान फ्राइको साथ कुखुराको पखेटा हो।
मा. डोलोरेस पी।
23 / 07 / 2020 मा 16: 08
चिकन ड्रमस्टिकहरू स्वादिष्ट हुन्छन्।
23 / 07 / 2020 मा 16: 11
मलाई सबैभन्दा मन परेको ग्रिल गरिएको स्तन, र तेलमा धेरै भिजाएको बिना भुटेको आलु हो।
24 / 07 / 2020 मा 18: 16
27 / 07 / 2020 मा 03: 27
फ्रेन्च फ्राइज र क्रोकेटहरू कत्ति स्वादिष्ट हुन्छन् र यदि तिनीहरू माथि बोसो बिना बनाइन्छ भने, तिनीहरू धनी हुन्छन्।
29 / 07 / 2020 मा 18: 10
मनपर्ने फ्राइड छनौट गर्न गाह्रो छ, तर मलाई कुखुराको पखेटा मन पर्छ जुन भित्रबाट कुकुर र रसदार हुन्छ। Ahhhhhhmmmmm
29 / 07 / 2020 मा 18: 43
अण्डा र ह्यामसहितका केही भुटेको आलु, अण्डा र चोरिजोसहित, अण्डा र कालो पुडिङ; आउनुहोस् अलिकति आलु खाऔं ….. आनन्द !!!!
29 / 07 / 2020 मा 19: 04
क्रोकेटहरू पहिलो श्रेणी, स्वादिष्ट छन् !!!
30 / 07 / 2020 मा 10: 53
मलाई केही फ्राइजको साथ तेल-रहित फ्राइर चिकन पखेटा मन पर्छ। स्वादिष्ट !!! तरकारी, क्रोकेट्स, आदि संग चिकन पनि धेरै राम्रो छ। भाग्य छ कि छैन हेरौं र म ड्र गर्छु, मेरो धेरै राम्रो चलिरहेको छैन र यी मध्ये एक दिन यसले काम गर्न छोड्छ।
30 / 07 / 2020 मा 10: 54
खैर, शुभकामना। अभिवादन
30 / 07 / 2020 मा 17: 47
मेरो मनपर्ने फ्राइड डिश अण्डा संग भुटेको आलु हो।
30 / 07 / 2020 मा 14: 13
ठीक छ, मेरो लागि चाँदीको क्रेस्ट फ्राइर राम्रो मूल्यमा लक्जरी हो
मेरो साथीसँग छ र मलाई यो मन पर्यो
म यो किन्छु
30 / 07 / 2020 मा 14: 18
नवीनतम मोडेल धेरै पूर्ण छ, समस्या उपलब्धता हो किनकि यो तुरुन्तै बेचिन्छ। वेबमा हामीसँग समान रूपमा राम्रो वा राम्रो विकल्पहरू छन्, र ठ्याक्कै उस्तै मोडेलहरू पनि छन्। खरीद संग शुभकामना।
30 / 07 / 2020 मा 16: 44
मेरो मनपर्ने परिकार... BBQ रिब्स र quesadillas?
30 / 07 / 2020 मा 16: 58
धेरै स्वादिष्ट तर यो भुटेको छैन, हाहा। भाग्य
30 / 07 / 2020 मा 17: 09
नमस्ते, मलाई ह्याम र एण्ड फ्राइज मन पर्छ, यम यम
30 / 07 / 2020 मा 17: 39
30 / 07 / 2020 मा 17: 41
भुटेको मिर्च र आलु संग मिलनेसास मेरो मनपर्ने पकवान हो।
30 / 07 / 2020 मा 17: 42
फ्राइड चिकन संग आलु ओमलेट, स्वादिष्ट! र विशेष गरी गर्मीमा पिकनिक लिन।
30 / 07 / 2020 मा 22: 05
नमस्कार सबैलाई। मेरो मनपर्ने परिकार स्किवर्स हो। यस अवस्थामा, म पक्का छु कि मलाई जुचीनी र औबर्गिन मन पर्छ किनभने तिनीहरू दुई उत्पादनहरू हुन् जुन मेरी श्रीमती र म प्रायः खान्छौं।
मैले आज बिहान फ्राइर किनें, चाँडै उठेर र लाइनमा। यदि तपाईं एक घण्टा पछि जानुभयो भने, त्यहाँ एक पनि बाँकी छैन ...
हार्दिक अभिवादन। रोबर्ट
30 / 07 / 2020 मा 22: 51
मेरो मनपर्ने डिश काली मिर्च र फ्रेन्च फ्राइज संग longaniza हो।
30 / 07 / 2020 मा 23: 57
निस्सन्देह मेरो मनपर्ने परिकार... फ्रेन्च फ्राइज...
31 / 07 / 2020 मा 10: 24
फ्राइज संग मेरो मनपर्ने सालमन
01 / 08 / 2020 मा 05: 11
मेरो मनपर्ने फ्राइड खानाहरू अण्डा, चोरिजो र फ्रेन्च फ्राइज हुन्। यद्यपि यो पटक पटक खानु हुँदैन। ?
01 / 08 / 2020 मा 17: 15
हामी प्रायः "पिलोपी" रेसिपीमा कुखुराको मासु खान्छौं र आलुको टुक्रा पनि खान्छौं। केटाकेटीहरूले उनीहरूलाई माया गर्छन् ... तर मेरो श्रीमान् र मैले कम बोसो XDD खानु पर्छ र हामीले भर्खरै केही समयको लागि तेल फ्राइर किन्ने बारेमा सोचिरहेका छौं तर तिनीहरूले कसरी काम गर्छन् भनेर हामी अझै विश्वस्त छैनौं ...
मारिया जोस परेडेस लुएन्गो
04 / 08 / 2020 मा 08: 57
मेरो मनपर्ने पकवान फ्राइड aubergines छ।
04 / 08 / 2020 मा 10: 24
म खुसी छु, अब म मेरी आमालाई एउटा दिन जाँदैछु, मेरो मनपर्ने नुस्खा मेरो मनपर्ने अग्लो कुखुराको मासु हो, र लेमन स्पन्ज केक
04 / 08 / 2020 मा 10: 42
मेरो मनपर्ने पकवान क्रोकेट हो, तिनीहरू जे भए पनि। तिनीहरूले मलाई गुमाए ...
04 / 08 / 2020 मा 19: 37
मसँग Tefal बाट दुई, एउटा दराज र अर्को राउन्ड छ र म दुबैसँग धेरै खुसी छु र म मेरो दोस्रो घरको लागि अर्को खोज्दै छु
05 / 08 / 2020 मा 00: 06
मेरो मनपर्ने फ्राइड डिश calamariala Romana हो।
05 / 08 / 2020 मा 04: 56
मेरो मनपर्ने डिश चिकन नगेट्स
05 / 08 / 2020 मा 23: 52
मेरो मनपर्ने डिश काली मिर्चको साथ फ्रेन्च फ्राइज हो।
07 / 08 / 2020 मा 12: 06
निस्सन्देह र निस्सन्देह ... croquettes।
08 / 08 / 2020 मा 09: 08
क्रोकेट्स र माछा स्टिकहरू उत्कृष्ट बाहिर आउँछन्। तपाईं तेलबाट बच्न सक्नुहुन्छ। र बिस्कुट पनि धेरै राम्रो बाहिर आउँछ। तर सानो लिनु पाप हो।
लुइस मिगुएल पेरेज क्यारिलो
08 / 08 / 2020 मा 10: 33
मेरो मनपर्ने परिकारहरू लसुन चिकन, फ्रेन्च फ्राइज र औबर्गिनहरू हुन्।
फातिमा गार्सिया सान्चेज
08 / 08 / 2020 मा 12: 13
मेरो मनपर्ने परिकार हाई फ्राइड चिकन हो
एलेना टेबा मोन्टेस
08 / 08 / 2020 मा 14: 51
मेरो मनपर्ने नुस्खा धेरै सरल छ: फ्रेन्च फ्राइज !!
मोनिका पास्कुअल गोजालो
08 / 08 / 2020 मा 20: 15
निस्सन्देह मेरो मनपर्ने डिश चिकन हो, यो स्वादिष्ट छ !!
08 / 08 / 2020 मा 22: 41
मेरो मनपर्ने परिकार मेरो हजुरआमाले बनाउने क्रोकेट हो
08 / 08 / 2020 मा 23: 17
मलाई गाबार्डिन, स्क्विड ए ला रोमाना, म्यारिनेट गरिएको एन्कोभिज, र…. तिनीहरूले मलाई के मोटो बनाउन लागेका छन् भनेर सोच नगरी तिनीहरूलाई खान पाउँदा खुशी हुनेछ?
09 / 08 / 2020 मा 00: 01
मेरो मनपर्ने फ्राइड डिश फ्राइजको साथ चिकन पखेटा हो।
09 / 08 / 2020 मा 01: 03
मलाई के गर्न मनपर्छ भुटेको मिर्चको साथ चिकन पखेटाहरू, तिनीहरू स्वादिष्ट छन् !!!
10 / 08 / 2020 मा 17: 15
10 / 08 / 2020 मा 18: 27
नमस्ते, मेरो मनपर्ने परिकार कुखुराको खच्चर हो।
10 / 08 / 2020 मा 18: 34
मेरा दुई साना शैतानहरूको मनपर्ने खाना, फ्रेन्च फ्राइहरूसँग नगेट
ब्लान्का एस्थर डियाज मुनोज
11 / 08 / 2020 मा 12: 26
तेल बिना फ्रेन्च फ्राइज, कति स्वादिष्ट र कति थोरै मोटो !!!!!
11 / 08 / 2020 मा 15: 23
मेरो मनपर्ने परिकार:
रोटी गरिएको चिकन र फ्रेन्च फ्राइज।
11 / 08 / 2020 मा 15: 24
11 / 08 / 2020 मा 18: 47
मेरो मनपर्ने नुस्खा कुरकुरा तरकारीहरू, सुकेको चना स्न्याक्स र पक्कै पनि, बेकन चिज फ्राइज हो जुन दिव्य हो।
12 / 08 / 2020 मा 09: 57
मेरो मनपर्ने फ्राइड आलु हो; तर आलु जुन तैलीय होइन तर क्रन्चीस हो!
12 / 08 / 2020 मा 16: 57
मेरो मनपर्ने डिश फ्रेन्च फ्राइज र पखेटा हो, म चाहन्छु
12 / 08 / 2020 मा 17: 27
मलाई आलु र क्रोकेट मन पर्छ
12 / 08 / 2020 मा 18: 05
मेरो मनपर्ने डिश पातलो रूपमा काटिएको फ्राइड सॉसेज कुरकुरा र फ्याट-मुक्त छन्
12 / 08 / 2020 मा 18: 44
मेरो भाँडा तेल बिना तरकारी र बेक्ड समुद्री बास हो
12 / 08 / 2020 मा 19: 45
मेरो मनपर्ने डिश निस्सन्देह सबै जंक फूड हो, तेल-रहित फ्राइरको लागि धन्यवाद तपाईंले त्यो खाना स्वस्थ तरिकामा खान सक्नुहुन्छ।
12 / 08 / 2020 मा 21: 57
मेरो मनपर्ने परिकार धेरै मौलिक छैन तर तपाईले के पाउनुहुन्छ, फ्रेन्च फ्राइज, हाहा। हेर्नुहोस् कि म तिनीहरूलाई तेल-रहित फ्राइरमा निःशुल्क बनाउन सक्छु। अभिवादन
13 / 08 / 2020 मा 12: 06
मेरो मनपर्ने परिकार, करी ससमा कुखुरा, आलु र प्याजको साथ।
14 / 08 / 2020 मा 21: 06
मलाई घरमा बनाइएका नगेट्स मन पर्छ।
09 / 01 / 2021 मा 19: 54
धेरै राम्रो लेख, मद्दत को लागी धन्यवाद !!
ब्ल्याक फ्राइडे तेल फ्री डीप फ्रायरहरू
साइबर सोमबार तेल-मुक्त फ्रायरहरू
प्रतिलिपि अधिकार 2022 ढुवानी 24 घन्टा - आधिकारिक ग्यारेन्टी - सजिलो भुक्तानी